BBC Somali - Warar - Qarax ka dhacay Syria
Qarax ka dhacay Syria
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Agoosto, 2012, 19:03 GMT 22:03 SGA
Qarax bam oo ka dhacay dalka Syria
Warbaahinta waddankaSuuriya ayaa sheegtay in 12 qof ay dhinteen qaar kale oo badanina dhaawacmeen markii bam baabuur la soo saarey lagu qarxiyey caasimadda Dimishaq.
Wararku waxa ay sheegayaan in argagixiso soo weerartey dad meyd aas loo wado barbar socdey.
Urur uu halgama xuquuqda aadamiga ee dalka Suuriya ayaa sheegey in dadka aaska tegey ay ahaayeen taageerayaal dowladda Madaxweyne Bashar al Assad oo ka soo qeyb gelayey aaska dad qarax Isniinta dhacey ku dhintey.
Weerarkaasi waxa uu ka dhacay Jaramana oo ku taal duleedka koonfur bari ee caasimadda Dimishaq.
Isla markaa dhaqdhaqaaqyada mucaaridka ayaa sheegaya in ciidamada dowladdu ay weeraro cusub ku soo qaadeen meelo badan oo dalka ah. Warar kale ayaa ka hadlaya duqeysyo culus qeybo ka tirsan caasimadda Dimishaq, xalab iyo gobolka waqooyi galbeed ee Idlib.